Hypernet: Kpatụ Na Latent Decentralized Computing Power ma ọ bụ Ree Onwe Gị | Martech Zone
Hypernet: Kpatụ Na Latent Decentralized Computing Power ma ọ bụ Ree Nke Gị
Fraịde, Ọgọstụ 17, 2018 Wenezde, August 15, 2018 Douglas Karr
Teknụzụ Blockchain ka bidoro, mana ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ọhụụ nke na-eme gburugburu ya ugbu a. Ọbara netwọk bụ otu n'ime ihe atụ ndị ahụ, na-agbatị ike ọkụ kọmputa na ngwaọrụ ọ bụla dị na weebụ. Na-eche banyere ọtụtụ narị nde CPU ndị na-anọdụ ala nkịtị ruo ọtụtụ awa n'otu oge - ka na-eji ụfọdụ ike, ka na-achọ nlekọta, mana na-efu ego.
Kedu ihe bụ Delọ Ọrụ Kwesịrị Ekwesị (DAC)?
Otu ụlọ ọrụ kwụụrụ onwe ya (DAC), bụ nzukọ a na-achịkwa site na iwu akwadoro dị ka mmemme kọmputa akpọrọ smart contracts.
Ihe ọhụrụ Hypernet abụghị usoro ihe ha; ọ bụ anya-yinye DAC mmemme ụdị. Ihe nlere a na - eme ka o kwe omume igba ihe ogugu dikwa na netwok nke igwe di omimi ma kesaa ya n’iile. Hypernet na-eweta ngwaọrụ ọnụ ma jiri ya dozie nsogbu ụwa.
Ọbara netwọk na-ahazi ngwaọrụ na ọrụ na netwọkụ site na nhazi oge ngọngọ. Ọ na-akpakọrịta na-egbo mkpa nke onye zụrụ ahịa na ndị na-eweta ya kwesịrị ekwesị, na-eme ka o doo anya na a rụchara ọrụ dị ka nke ọma dị ka o kwere mee, ma na-enyere aka ịnọgide na-enwe nchebe na ntụkwasị obi. DAC na-eji usoro akara aka iji hụ na akụ dị ebe achọrọ maka ndị ahịa ya, gụnyere:
Ikwu - Ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ere ga-emerịrị ihe nkwado iji wuchaa ọrụ ha. HyperTokens bụ nkwekọrịta ahụ. Onye na-ere ahia na-etinye ego na ngwaọrụ ha ebe ndị na-azụ ahịa na-etinye ụgwọ ha na nkwekọrịta nkwekọrịta dị n'ihu. Na netwọkụ nke ndị na-eme ihe nkiri amaghị, nkwa ahụ na-eweta udo nke uche nye ndị na-azụ ma na-ere ere.
Ntughari - Aha onye ọrụ na-abawanye site na ịbụ onye na-eweta ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi na onye na-arụ ọrụ na onye na-azụta ihe, na aha a na-abanye kpamkpam na blockchain. Aha onye ọrụ na-eme ka o kwe gị omume isonye na ọrụ compute.
Ego - HyperTokens bụ ego azụmahịa nke na-enyere aka n'ịzụ na ire nke ngụkọta na netwọkụ.
Nnweta Ngwuputa - Ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ike ịnweta HyperTokens ka ị na-eche maka ọrụ mgbakọ, site na ịnwe dị na oghere. Nke a na-akpali ndị ọrụ isonye na netwọkụ ma mee ka ngwaọrụ ha dị. Mgbe ha nọ n'ọnụ ụlọ ahụ, ndị ọrụ nwere ike ịgbagha ngwaọrụ ndị ọzọ na-abaghị uru iji hụ ma ha dị n'ịntanetị n'ezie. Ọ bụrụ na ha ada ada aka mgba, ha lekọtara onye inyeaka ha. Ọnụ ọgụgụ nke tokens dị maka igwu ala na-ebelata ka oge na-aga, ya mere, ịdebanye aha ngwa ngwa na-akpata ego kacha mma.
Mgbasa ochichi na ntuli aka - Onu na-esonye na nsogbu na nzaghachi ma bụrụ ihe agbamume maka inye aka jigide ogo nke netwọkụ, na iwepụ ndị omekome ọjọọ. Ọnụ ọ bụla na-egbu akụkụ ndị ọzọ na usoro ịma aka / nzaghachi iji chọpụta ma ọ bụrụ na ha nọ n'ezie mgbe ha kwuru na ha nọ. Enwere ike ịme votu mgbanwe dị ukwuu na netwọkụ, yana ịtụ vootu gị ọnụ ọgụgụ nke HyperTokens ị jidere.
Ọbara netwọk emeela kọmputa kachasị elu n'ụwa niile site na iji ike mgbakọ na-arụ ọrụ nke ngwaọrụ latent. N'okwu layman, nke ahụ pụtara na mgbe ọ bụla akụrụngwa dịka laptọọpụ, smartphones na mbadamba anaghị eji ya, Hypernet nwere ike ijikwa ike ahụ, yabụ weebụsaịtị anaghị ada ada n'ihi oke ibu sava. Kedu ihe ọzọ, ebe ọ bụ na ekesara ma gbasaa ike a, enwere ohere ọ bụla na ihe ọ bụla nwere mmetụta, data onwe onye anakọtara n'oge azụmahịa eCommerce nwere ike imebi.
Tags: DACCentlọ ọrụ kwadoro kwadorokọmputanetwọk